Imikhiqizo Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Imikhiqizo Factory
Indwangu ye-Teflon Camera fiberglass
Indwangu ye-Teflon Camera fiberglass yenziwa nge-fiberglass ehamba phambili engenisiwe njengendwangu yokweluka ukuze iboshwe ngokusobala noma ngokukhethekile eboshwe ngendwangu eyisisekelo ye-fiberglass, egcwele i-resin enhle ye-PTFE bese iyenza ibe yindwangu ehlukahlukene ye-ptfe izinga lokushisa eliphakeme lokuqina ngobubanzi obuhlukahlukene nobubanzi.
Indwangu emnyama ye-Ptfe fiberglass
Indwangu emnyama ye-Ptfe fiberglass yenziwa nge-fiberglass ehamba phambili engenisiwe njengoba impahla yokweluka ihlanganiswe ngokusobala noma ngokukhethekile iboshwe kwindwangu eyisisekelo ye-fiberglass, egcwele i-resin enhle ye-PTFE bese iyenza ibe yindwangu ehlukahlukene ye-ptfe lokushisa ukumelana nobubanzi obuhlukahlukene nobubanzi.
Indwangu ye-Ptfe yenziwa nge-fiberglass enhle kakhulu engenisiwe njengempahla yokweluka yokuluka okucacile noma eboshwe ngokukhethekile kwindwangu eyisisekelo ye-fiberglass, eboshwe nge-resin enhle ye-PTFE bese iyenza ibe yindwangu ehlukahlukene ye-ptfe lokushisa ukumelana nobubanzi nobubanzi obuhlukile.
Ptfe laminated Indwangu
Indwangu ye-Ptfe Laminated yenziwa nge-fiberglass ehamba phambili engenisiwe njengoba impahla yokweluka ihlanganiswe ngokusobala noma ngokukhethekile iboshwe kwindwangu eyisisekelo ye-fiberglass, egcwele i-resin enhle ye-PTFE bese iyenza ibe yindwangu ehlukahlukene ye-ptfe lokushisa ukumelana nobubanzi nobubanzi obuhlukile.
Ptfe Camera Tape
I-Ptfe Camera Tape yenziwa nge-fiberglass ehamba phambili engenisiwe njengempahla yokweluka ukuze iboshwe ngokusobala noma ngokukhethekile eboshwe endwangu eyisisekelo ye-fiberglass, embozwe nge-resin enhle ye-PTFE bese iyenza ibe yindwangu ehlukahlukene yokumelana nokushisa okuphezulu kwe-ptfe ngobukhulu obuhlukile nobubanzi.
Ptfe Camera Izindwangu
Ptfe Camera Izindwangu zenziwa kusukela fiberglass engcono amazwe njengoba impahla ukweluka ukuze obumbene plain noma ngokukhethekile obumbene indwangu fiberglass ophakeme eyisisekelo, camera nge emihle PTFE resin ke wenze kube ezihlukahlukene ptfe lokushisa ukumelana eliphezulu indwangu e ukujiya ezahlukene kanye nobubanzi.
I-Ptfe fiberglass yenziwa nge-fiberglass ehamba phambili engenisiwe njengoba impahla yokweluka ihlanganiswe ngokusobala noma iklanywe ngokukhethekile kwindwangu eyisisekelo ye-fiberglass, egcwele i-resin enhle ye-PTFE bese iyenza ibe yindwangu ehlukahlukene yokushisa okushisa okuphezulu kwe-ptfe ngobukhulu obuhlukile nobubanzi.
Indwangu Yengilazi Eboshwe Ptfe
Indwangu Yengilazi Eboshwe nge-Ptfe yenziwa nge-fiberglass ehamba phambili engenisiwe njengoba impahla yokweluka ihlanganiswe ngokusobala noma iklanywe ngokukhethekile kwindwangu eyisisekelo ye-fiberglass, egcwele i-resin enhle ye-PTFE bese iyenza ibe yindwangu ehlukahlukene ye-ptfe lokushisa ukumelana nobubanzi nobubanzi obuhlukile.
Ptfe Camera fiberglass
Ptfe Camera fiberglass zenziwa kusukela fiberglass engcono amazwe njengoba ukweluka impahla ukuze obumbene plain noma ngokukhethekile obumbene indwangu fiberglass ephakeme eyisisekelo, camera nge emihle PTFE resin ke kwenze kube ezihlukahlukene ptfe lokushisa ukumelana eliphezulu indwangu e ukujiya ezahlukene kanye nobubanzi.
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/14
Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Indwangu i-fiberglass, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass,